XOG: Puntland oo ka soo horjeesatay guddiga Farmaajo u magacaabay Wada-hadallada Somaliland | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Puntland oo ka soo horjeesatay guddiga Farmaajo u magacaabay Wada-hadallada Somaliland
XOG: Puntland oo ka soo horjeesatay guddiga Farmaajo u magacaabay Wada-hadallada Somaliland
Garowe (Halqaran.com) – Maamulka Puntland ayaa waxa uu ka horyimid guddigii uu Arbacadii Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo u magacaabay wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland.
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Madaxtooyada Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in Puntland ay soo dhaweynayso midnimada iyo dhismaha dowladnimada, iyadoo la raacayo sida uu qabo Dastuurka KMG ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Maamulka Puntland waxay qoraalka ku sheegtay inay qaadacday guddiga Madaxweyne Farmaajo uu u magacaabay inay Soomaaliya ku metelaan wadahadalada Somaliland.
Waxayna ku andacoonaysaa in hannaanka loo maray magacaabista guddigan aanu waafaqsanayn Dastuurka Qabyo Qoraalka Dalka.
Haddaba, Hoos ka aqri War-saxaafadeedka ka soo baxay Puntland.